Okwu nke Malcolm X - Afrikhepri Fondation
Okwu nke Malcolm X
Lmgbe ichoro mba, a na - akpo ya dika mba. Mgbe ndị ọcha nke United States hụrụ onwe ha na ha na-agba mgbagha megide England, gịnị kpatara ya? Ndị ọcha nke mba a chọrọ ala a wuo mba ọcha ọzọ. Ọ bụ ịhụ mba n'anya. Ntughari America bu ndi ocha nke obodo. Ntughari ndị Russia kwa, mana ee, ọ bụ ịhụ mba n'anya. Do kwenyeghị? Kedu ihe kpatara ị jiri chee na Krushchev na Mao enweghị ike ikwenye? N'ihi ịhụ mba n'anya ọcha. Ntughari a nile na - aga n'ihu ugbua n'Esia na Africa, na gịnị ka ha sitere? Ntughari bu onye isi ojii. Ọ chọrọ mba. M na-agụ ọmarịcha ederede site n’aka pastọ Cleage, nke o kọwara na ọ bụrụ na ọ nweghị ike iso onye ọ bụla nọ n’obodo a, ọ bụ maka na mmadụ niile na-atụ ụjọ ịbụ onye e jikọrọ ya na ịhụ mba n'anya. Ọ bụrụ n’ị na-atụ egwu ịhụ mba n’anya ojii, ị na-atụ egwu ngagharị iwe. Ma ọ bụrụ na-amasị gị mgbanwe, ị na-amasị ojii mba.
Iji ghọta nke a, ị ga-eche echiche banyere ihe nwa anyị nwoke na-eto eto, nke nọ n'ebe a, kwuru banyere ọdịiche dị na nke dị n'oge ịgba ohu n'etiti anụ ụlọ na onye ọrụ ugbo nke ubi. Ndị na-ebi n'ụlọ nna ukwu ahụ bụ ụlọ ndị ụlọ; ha na-ejiji nke ọma, ha riri ezigbo nri n'ihi na ha riri dị ka nna ukwu, nke ọ na-enweghị ike. Ha bi n'ime ime ụlọ ma ọ bụ okpuru ulo, kama ha bi nso nna-ukwu; ma ha h®r® nna ukwu ukwu kar∫a nna ukwu ah® h®r® onwe ya n'anya. Ha nyere ndụ ha iji chebe ụlọ nna ha ukwu, jiri ọchịchọ obi karịa nna ya ukwu. Ọ bụrụ na nna ukwu ahụ kwuru, "Anyị nwere ezigbo ụlọ," onye na-elekọta ụlọ sịrị, "Ee, anyị nwere ezigbo ụlọ. Mgbe nna ukwu ahụ kwuru "anyị," ọ sịrị "anyị." Nke a bụ ihe gbasara ụlọ.
Ọ bụrụ na ụlọ nna ukwu ahụ gbara ọkụ, ụlọ ahụ na-agbanye ọkụ ọkụ karịa ike nna ya ukwu. Ọ bụrụ na nna ukwu ahụ dara ọrịa, ụlọ a ga-asị: "Gịnị bụ okwu, onyeisi, anyị na-arịa ọrịa? O gosiputara onwe ya na nna ya ukwu, karia nna ya ukwu mara na onwe ya. Ma ọ bụrụ na ị bịara chọta onye na-elekọta ụlọ ka ị gwa ya: "Ka anyị gbapụ, ka anyị zọpụta onwe anyị, hapụ ụlọ a," ụlọ a na-ele gị anya na ịza ya: "Ị bụ onye nzuzu, agadi nwoke, gịnị ka nke ahụ pụtara, hapụrụ ụlọ a? Ị ma ụlọ ka mma karịa nke a? Ebee ka m ga-eji ejiji karịa ebe a? Ebee ka a ga-eri nri karịa ebe a? Nke a bụ ihe anụ ụlọ dị. N'oge ahụ, a na-akpọ ya "obere ụlọ". Ọ bụ otú ahụ ka anyị si akpọ ya taa, n'ihi na enwere ụfọdụ.
The ụlọ negro hụrụ nna ya ukwu n'anya. Ọ chọrọ ka ya na ya biri. Ọ ga-akwụ ụgwọ okpukpu atọ nke ụlọ ọ na-adị ndụ, nanị iji soro nna ya ukwu biri, ma nwee ike ịnya isi na-abụ "nanị nkuku ojii". "Abụ m naanị otu n'ime nnọkọ oriri m. "Abụ m naanị otu n'ụlọ akwụkwọ a ..." Ị bụ naanị nigger anụ ụlọ. Ma ọ bụrụ na mmadụ abịa ebe ahụ ịgwa gị: "Ka anyị hapụ ụlọ a," ị zara kpọmkwem ihe ụlọ ụlọ nke ubi ahụ zara, sị: "Gịnị ka ị pụtara site na ịhapụ ụlọ a? Ikewapụ na America, nke a na-acha ọcha? Ka ị ga - achọta ọrụ ka mma karịa nke i nwere n'ebe a? Ee, nke ahụ bụ ihe ị na-ekwu. Ma ị hapụrụ isi gị n'Africa.
N'okpuru ihe ubi ahụ, e nwekwara onye ọrụ na-arụ ọrụ. Negroes siri ike bụ ndị mmadụ. Ndị ojii na-adịkarị ọtụtụ n'ọhịa karịa n'ụlọ. Nwa nwoke na-arụ ọrụ na-eduga ndụ nke hel. Ọ na-eri nri. Ndị na-eri anụ ụlọ na-eri anụ kacha mma. Nlekọta nke ubi enweghị ihe ọ bụla ma e wezụga ihe fọdụrụ n'anụ ahụ anụ ezi, ihe a na-akpọ ugbu a na-apụ. N'oge ahụ, ha kpọrọ ya ezigbo aha ya. Nke ahụ bụ ihe ị bụ ndị na-eri nri. Ụfọdụ n'ime unu ka na-eri nri.
A na-egbu ihe ndị dị n'ubi site n'ụtụtụ ruo n'abalị; ọ bi n'ụlọ ezumike, n'ime ụlọ; ọ na-eyiri uwe ochie nke ọ na-adịghị onye ọ bụla chọrọ ọzọ. Ọ kpọrọ nna ya ukwu asị. Ee, ọ kpọrọ ya asị. Ọ maara ihe. Akwukwo ulo a huru nna ya ukwu n'anya, ma ohia nke ubi, ma cheta na obu ihe ka ukwuu, o bu onye isi. Mgbe ụlọ ahụ gbara ọkụ, ọ gbalịrị imenyụ ọkụ ahụ, ọnụ ahịa nke ubi ahụ kpere ekpere maka ikuku. Mgbe nna ukwu ahụ dara ọrịa, njiri nke ubi ahụ kpere ekpere ka ya nwụọ. Oburu na onye obula biara ichoputa uzo nke ubi ka gwa ya: "Ka ayi si n'ulo a puta, ka anyi zoputa ayi," o zaghi ya: "iga ebee? Ma "ihe ọ bụla karịa ụlọ a. Enwere ugbua ubi na America. Abụ m otu. Ndị mmadụ na-agụnye nsị nke ubi. Mgbe ha na-ahụ ụlọ ahụ ọkụ na-acha ọcha, ị na-anụ ka obere ojii na-ekwu, "ọchịchị anyị nọ ná nsogbu." Cheedị echiche nwa ojii, "ọchịchị anyị! Enweela m otu okwu banyere "ndị na-agụ kpakpando anyị," "Ọgbọ agha anyị! Nke a bụ nwa nwoke nke nwere uche.
Dịka nna ukwu ahụ, n'oge ahụ, jiri Tom, ụlọ na-elekọta, iji nọgide na-enwe nchịkwa nke ubi n'okpuru ọchịchị ya, nna ochie ahụ bụ Negro ugbu a bụ naanị nne na nna. Tom nke narị afọ nke iri abụọ, iji mee ka anyị nyocha ma debe anyị n'aka gị, mụ na gị, iji mee ka anyị bụrụ ndị na-adịghị eme ihe ike. Ọ bụ Tom na-eme ka ị ghara ime ihe ike. Ọ dị ka mgbe ị na-aga ezé eze ma ọ na-adị njikere dọka gị ezé. Ị ga-esi ike mgbe ọ malitere ịgba égbè. Ya mere, ị banye n'ime agba a ngwaahịa a na-akpọ novocaine, iji mee ka ị kwenyere na ọ dịghị ihe ọ bụla i nwere. Ị na-anọdụ ala na n'ihi na ị nwere ihe a nile novocaine na agba gị, ị na-ata ahụhụ n'udo. Ọbara na-asọ site n'apata gị, ma ị maghị ihe na-eme. N'ihi na a kụziiri gị ịta ahụhụ n'udo.
Malcolm X ike ojii
11,90€ dị na ngwaahịa
6 ọhụrụ site na 11,90 €
Ejiri 9 € 11,00 mee ihe
Zụta € 11,90
ka Ọgọst 6, 2020 7:49
Ụbọchị mwepụta 2008-03-13T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2008-03-13T00:00:01Z
Zọ isi zụlite ịhụ onwe gị n'anya - Louise Hay (Audio)
Krishnamurti na nsogbu guru akwukwo (Audio)
Gịnị bụ Feng Shui?
28 agobọchị gara aga